बहाना वैदेशिक रोजगारीको, ठगी जनप्रतिनिधिबाटै ! — Newskoseli
बहाना वैदेशिक रोजगारीको, ठगी जनप्रतिनिधिबाटै !
किरण भट्टराई सप्तरी, १९ माघ ।
स्थानीय जनतालाई समस्या पर्दा त्यसको समाधान गरिदिने र उनीहरुलाई सहजता प्रदान गर्ने काम हुनुपर्ने हो जनप्रतिनिधिको । तर, सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका एक स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनतालाई सहजता होइन, उल्टै बिचल्लीमा पारिदिएको भेटिएको छ ।
शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नं. १० का वडा सदस्य रहेका मोहम्मद अनबारुलले दर्जनौं गाउँलेलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको पीडितहरुको बताएका छन् । शम्भुनाथ नपा– ८, पोखरीयाका घुरन रामलाई अनबारुलले कतार पठाइदिने भन्दै डेढ वर्षअघि राहदानी र ९५ हजार रूपैयाँ नगद मागे । घुरन रामले ५ हजार रूपैयाँमा बन्ने राहदानी छिटो बनाउन १० हजार रूपैयाँ तिरे र राहदानीसहित ३५ हजार रूपैयाँ अनबारुललाई बुझाए ।
त्यसबेला विदेश जान अरुबाट लिएको १ लाख रूपैयाँ ऋणको मासिक ब्याज मात्रै ५ हजार रूपैयाँ तिर्नु परिरहेको उनको गुनासो छ । सो ऋण रकम काठमाडौं जाँदा–आउँदा, अनबारुललाई दिँदा र राहदानी बनाउँदा सकिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने – “एक दिन त भोलिको फ्लाइट छ भन्दै खबर गरे, रातारात घर–परिवारसँग बिदावारी भएर काठमाडौं गएँ तर फर्किएर आउनुपर्‍यो ।” उनकी श्रीमती सीतादेवी रामले घरबाट कतार जाने भनी निस्किएका श्रीमानलाई तीन–चार पटक बिदावारी गरेको तर काठमाडौं पुगेर श्रीमान् फर्किने गरेको स्मरण सुनाइन् ।
घुरन राम त्यसबेला लागेको ऋण तिर्न यसै साता भारतको दिल्लीमा जान लागेका छन् । त्यहाँ महिनाको १५ हजार रूपैयाँ पाउने गरी कामका जान लागेको उनले सुनाए । अनबारुललाई पटक–पटक आफ्नो ३५ हजार रूपैयाँ फिर्ता गर्न आग्रह गरे पनि फिर्ता नगरेको गुनासो उनले गरे । शम्भुनाथ नपा– ५ का रामनारायण सरदार अनबारुललाई ९५ हजार रूपैयाँ तिरेर कतार गएको डेढ महिनापछि स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएर नेपाल फर्किए ।
विदेश पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण अनुत्तीर्ण भएमा स्वदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले विदेश जाँदा लागेको रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनबारुलले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाबाट आफूले रकम उठाइदिन्छु भन्दै उनलाई गाउँ बोलाए तर एक वर्ष बित्दा समेत उनले सो रकम दिलाउन लगाएका छैनन् ।
अझ अनौठो त के छ भने अनबारुलले ठगी गरेका व्यक्तिहरुलाई उल्टै रकम दिएको कागज गराउने गरेका छन् । साउदी अरबमा मासिक १ हजार २ सय साउदी रियाल पाउने गरी राम्रो कामका लागि अवसर आएको र त्यहाँ पठाइदिने भन्दै अनबारुलले शम्भुनाथ नपा– ९, बसवलपुरका मुसहर समुदायका कन्की सदासँग २ वर्षअघि ६५ हजार रूपैयाँ लिए ।
अनबारुलले आफूले रकम लिएको कागज गर्नुको साटो उल्टै आफूले सदालाई ६० हजार रूपैयाँ दिएको कागज गराए । पीडित सदाले भने – “६५ हजार रूपैयाँ दिएको केही समयपछि अनबारुलले साउदीको भिसा आइसकेकाले जान १ लाख २० हजार रूपैयाँ लाग्ने भन्दै ६० हजार तिर्न बाँकी रहेको कागज गराए ।”
सदालाई साउदी जाने भन्दै तीन चोटि काठमाडौं बोलाए तर आज, भोलि भन्दाभन्दै दुई वर्ष बित्यो । न त उनको पैसा फिर्ता आयो न त उनी विदश नै जान पाए । कन्की सदासँग मात्रै होइन, उनका दाजु सुकदेवा सदासँग पनि उनै अनबारुलले साउदी अरबमा रोजगारीका लागि पठाइदिने भन्दै १ लाख ४० हजार रूपैयाँ लिएका छन् ।
अनबारुलले साउदी पठाएका सोही गाउँका रामचन्द्र सदाले पनि भने अनुरुपको तलब पाएका छैनन् । रामचन्द्रका बुबा जिलेवी सदाले मासिक १ हजार २ सय साउदी रियल पाउने भनेर पठाएकामा छोराले मासिक ६ सय साउदी रियल मात्रै पाइरहेको जानकारी दिए ।
रामचन्द्रबाट पनि अनबारुलले रकम लिएर उल्टै रकम दिएको कागज गराएका छन् । जिलेवीले भने– “जानुअघि ६० हजार रूपैयाँ अनबारुललाई दिएपछि थप ६० हजार पुगेन भन्दै ६० हजार तिर्न बाँकी रहेको कागज गराए । त्यसमध्ये ४५ हजार तिरिसकें, अब १५ हजार तिर्न बाँकी छ ।”
छोराका कमाइ राम्रो नभएकाले फर्किने दिनसम्म पनि जाँदा लिएको ऋण तिर्न नसकिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् जिलेवी । शम्भुनाथकै अशोक कुमार रायलाई पनि अनबारुलले १ हजार १ सय कतारी रियल तलब पाउने भन्दै कतार पठाए । उनले ७ सय रियल मात्रै पाउँदै आएका छन् ।
जाँदा ८० हजार रूपैयाँ तिरेर गएका रायलाई थप ४० हजार रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको कागज अनबारुलले गराएका थिए । भनेअनुसारको काम र तलब नपाएपछि रायले बाँकी रहेको रकम तिर्न अस्वीकार गरेपछि उनकी श्रीमतीविरुद्ध प्रहरी चौकीमा उजुरी गरे ।
यसरी विदेश लैजाने भन्दै दर्जनौं व्यक्तिलाई ठगी गरेका अनबारुल गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भए । सुरक्षित आप्रवास परियोजना (सामी) की परामर्शदाता नीता चौधरीले अनबारुलले विदेश लैजाने भनी रकम लिएर नपठाएका, विदेश गइसकेपछि भने अनुसारको काम र तलब नपाएका जस्ता एक दर्जनभन्दा बढी निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको जानकारी दिइन् ।
सामीको पहलमा घुरन राम, अरुन राम, रामनारायण सरदार लगायतले विभिन्न मितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै प्रहरीमा अनबारुलविरुद्ध उजुरी दिए पनि उनीमाथि अझै कारबाही हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले अनबारुलविरुद्ध प्रहरीमा परेको उजुरीबारे आफूलाई जानकारी नरहेको बताए । यसबारे स्थानीय प्रहरीबाट जानकारी माग्ने जवाफ उनले दिए ।
पंक्तिकारले अनबारुलसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी ठगीको आरोपबारे सोध्न खाेज्दा गलत नम्बर परेको भन्दै उनले फोन काटे ।